IMonsanto ne-EPA bafuna ukugcina ukusebenzelana kwabo kuyimfihlo
IMonsanto, i-EPA Funa Ukugcina Izinkulumo Ziyimfihlo Ekubuyekezweni Komdlavuza WeGlyphosate
Posted on January 19, 2017 by UStacy Malkan
IMonsanto Co. kanye neziphathimandla ze-Environmental Protection Agency balwa nemizamo yezomthetho ehlose ukuhlola ithonya likaMonsanto ekuhlolweni kokulawulwa kwamakhemikhali abalulekile ku-Roundup herbicide yenkampani, imibukiso emisha yenkantolo yenhlangano.
Izambulo ziqukethwe ochungechungeni lokugcwaliswa okwenziwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule eNkantolo Yesifunda sase-US esiFundeni SaseNyakatho saseCalifornia njengengxenye yamacala afakwe ngabantu abangaphezu kwama-50 abamangalela iMonsanto. Abamangali bathi bona noma abathandekayo babo bathuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) ngemuva kokuchayeka ku-Roundup herbicide, nokuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka ehlanganisa izingozi zomdlavuza ezixhunyaniswe nekhemikhali.
Abameli babamangali bafuna inkantolo iphakamise uphawu kumadokhumende anemininingwane ngokuxhumana kukaMonsanto nowayengumphathi ophezulu we-EPA uJess Rowland mayelana nokuhlolwa kokuphepha kwe-EPA kwe-glyphosate, okuyisithako esiyinhloko kuRoundup. IMonsanto yaguqula imibhalo lapho itholakala kodwa yababhala “njengeyimfihlo,” igama labameli babamangali bathi akulungile. Bafuna nokususa uRowland. Kepha iMonsanto ne-EPA bayaziphikisa izicelo, imibhalo yasenkantolo iyakhombisa.
I-EPA ichithe iminyaka embalwa edlule ihlola ezempilo nezokuphepha kwemvelo kwe-glyphosate njenge impikiswano yomhlaba ngaphezu kwamakhemikhali sekukhuphukile. I-World Health Organization's International Agency for Research on Cancer (IARC) yamemezela ngoMashi 2015 ukuthi i-glyphosate iyi- mhlawumbe umdlavuza womuntu, ngokuhlangana okuhle okutholakala phakathi kwe-glyphosate ne-NHL. IMonsanto ibilokhu ilwela ukuphikisa lokho kuhlukaniswa.
URowland ubelokhu ebalulekile emizameni kaMonsanto ukuphikisa ukutholwa kwe-IARC ngoba kuze kube nyakenye ubeyiphini lomqondisi wesigaba ngaphakathi kwesigaba semiphumela yezempilo yeHhovisi Lezinhlelo Zezibulala-zinambuzane le-EPA, ephethe umsebenzi wososayensi abahlola imiphumela yezempilo yabantu yokuchayeka emithini yokubulala izinambuzane efana ne-glyphosate. Futhi, okubaluleke kakhulu, waba ngusihlalo we-EPA's Cancer Assessment Review Committee (i-CARC) eyakhipha umbiko wangaphakathi ngo-Okthoba 2015 okwenze isivumelwano sokutholwa yi-IARC. Lowo mbiko wamakhasi angama-87, esayinwe yiRowland, inqume ukuthi i-glyphosate "kungenzeka ingabi umdlavuza kubantu."
Ukutholwa kwe-EPA kuhlonishwe kakhulu nguMonsanto, okusiza ukuqinisa ukuzivikela kwenkampani amacala esikweletu se-Roundup, nokusiza ekusekeleni ukwesekwa kwemakethe komkhiqizo oletha imali eyizigidigidi zemali enkampanini minyaka yonke. Isitembu se-EPA sokuvuma ukuphepha kwe-glyphosate emashumini ambalwa eminyaka edlule nakho kube ngukhiye empumelelweni yezitshalo zikaMonsanto ezakhiwe ngofuzo, ezibekezelela i-glyphosate, ebezithandwa kakhulu ngabalimi.
Kepha ukuphathwa kombiko we-CARC kwaphakamisa imibuzo ngenkathi ithunyelwa kuwebhusayithi ye-EPA yomphakathi ngo-Ephreli 29, 2016 futhi yagcinwa kusayithi izinsuku ezintathu kuphela ngaphambi kokudilizwa. Le nhlangano ithe lo mbiko ubungewona owokugcina nokuthi bekungamele uthunyelwe, kodwa UMonsanto uwutatazelile lo mbiko njengokuqinisekiswa komphakathi kwezicelo zayo zokuphepha ze-glyphosate. Le nkampani iphinde yaletha ikhophi yombiko enkantolo kaMeyi ekulalelweni kwenkantolo yaseRoundup njengendawo yokuphikisana nokuhlukaniswa komdlavuza we-IARC. Kungekudala ngemuva kokuthi umbiko weCARC ususwe kwiwebhusayithi ye-EPA, uRowland washiya umsebenzi wakhe weminyaka engama-26 e-EPA.
Abameli babamangali ucele ukususa uRowland ukufunda ngaleso simo nokunye ukusebenzisana neMonsanto. Kepha, kanye nokuphikiswa kukaMonsanto ekukhipheni amadokhumende ahlobene nezingxoxo zayo neRowland, i-EPA ikhulume ngqo wenqabe isicelo sokufakwa, ukusho ukuthi "ngeke kucace ku-EPA" ukuvumela abameli ukuthi babuze uRowland mayelana nokubuyekezwa komdlavuza nokuxhumana neMonsanto.
IMonsanto kuze kube manje isike yaguqula amakhasi emibhalo ayizigidi eziyisithupha ngenqubo etholwe yinkantolo, kepha isikhombe cishe amaphesenti angama-85 olwazi "njengeluyimfihlo," okusho ukuthi abameli babamangali kumele bakhiphe imininingwane evela kulawo madokhumende kunoma yiziphi izinkantolo kungafinyelelwa izintatheli noma amanye amalungu omphakathi. Lokho kubizwa akulungile emibhalweni eminingi, ikakhulukazi leyo ebhekene nokuxhumana nenkampani, futhi ithonya nemizamo yezikhulu ze-EPA, Abameli babamangali bayaphikisana.
Abameli bathi imibhalo etholwe ngokutholakala ikhombisa ukuthi "iMonsanto ibizethemba sonke isikhathi ukuthi i-EPA izoqhubeka nokuxhasa i-glyphosate, noma yini eyenzekile noma ngabe kubanjwe bani." Ngokusho kokufakwa enkantolo ngabameli babamangali, le mibhalo ikhombisa ukuthi “kuyacaca ukuthi iMonsanto yayithonywe kakhulu kwi-OPP ye-EPA, futhi yayiseduzane noMnu. Rowland… Ubufakazi obubhalwe phansi bubonisa ngokuqinile ukuthi inhloso kaMnu. Rowland kwakuwukufeza izinhloso zeMonsanto.”
I-EPA iyinkokhelo yomkhokhi wentela, i-ejensi yomphakathi futhi ukusebenzisana kwayo neMonsanto kufanele kuhlolwe umphakathi, ikakhulukazi ngenxa yokusetshenziswa kabanzi kwemikhiqizo ye-glyphosate herbicide kanye nempikiswano eqhubekayo yamazwe omhlaba mayelana nokuphepha kwamakhemikhali, bathi.
“Impilo nokuphepha kwezigidi zezakhamizi zase-US kusengozini,” kusho ukufakwa kwabamangali ngoJan. “Izinqumo ezithinta impilo yomphakathi akumele zisuselwe ezingxoxweni eziyimfihlo phakathi kweMonsanto nezikhulu ze-EPA. Uma iMonsanto ifuna ukukhulumela abasebenzi be-EPA egameni le-glyphosate, kufanele bakwenze lokhu esidlangalaleni, ukuze izakhamuzi ezithintekayo zithole ithuba elilinganayo lokumela impilo yazo kanye nempilo yemindeni yazo. Le nkinga ibaluleke kakhulu ukuvumela iMonsanto ukuthi ithonye ngokungafanele i-EPA, bese ifihla ukuxhumana okunjalo ngemuva kwegama 'eliyimfihlo' elingalungile. ”
“Impilo nokuphepha kwezigidi zezakhamizi zase-US kusengozini. Izinqumo ezithinta impilo yomphakathi akumele zisuselwe ezingxoxweni eziyimfihlo phakathi kweMonsanto nezikhulu ze-EPA. ”
IMonsanto isamile kwelokuthi imibhalo yayo ayenziwanga emphakathini, ithi ukuyikhipha kuzoba "ngaphambi kwesikhathi futhi kungafanele." Ukuvumela ukusatshalaliswa komphakathi "kwemibhalo embalwa yenkampani yangaphakathi ekhishwe emongweni… kungaba yingozi kuMonsanto futhi kungahle kulimaze igama," abameli benkampani babhale bephendula.
Abameli babamangali bathi okungenani imibhalo emine abayitholile icace bha umphakathi futhi “ikhanyisa ukuthi elinye lamasu amakhulu ebhizinisi likaMonsanto yithonya layo eliyimfihlo futhi elingahlosile ku-EPA.” Imibhalo ifaka phakathi imemo yangaphakathi namaketanga e-imeyili, ngokusho kwezincazelo zemibhalo.
“Njengoba ukuxhumana kukaMonsanto ne-EPA kusalokhu kuyimfihlo, le mizamo eyaziwayo yokunxenxa imane nje iyisiqalo sokuhlangana kukaMonsanto ne-EPA. Izenzo ezimbi zikaMonsanto zokwephula imithethonqubo yase-US ngokuxhumana okuyimfihlo ne-EPA akufanele zivuzwe ngokuzivumela zigcine lezi zimfihlo ngokuzigxiviza nje ngokuthi 'Ukuyimfihlo,' ”kusho ummeli wabamangali kulokho okufakiwe. “Le mibhalo ifingqa ukuxhumana ne-EPA okungakhunjulwa kwenye indawo; akuzona izimfihlo zokuhweba futhi umphakathi unentshisekelo ephoqelekile yokudalula. ”
IMonsanto iphikisana ngenye indlela, ithi imibhalo emine ekhishwayo "iqukethe imininingwane yezentengiselwano ebucayi, engeyona eyezomphakathi, ihlobene nesiphakamiso esifuna ukuthola ukutholwa kumuntu ongeyona inhlangano, futhi sithatha kuphela ukuxhuma okuyindida, okungcono kakhulu, emibuzweni ekhonjisiwe ku lokhu kumangalelwa; ngakho-ke, noma ikuphi ukuthanda umphakathi “kuncane.”
Ijaji lesifunda sase-US uVince Chhabria, obhekele ukuqulwa kwamacala eRoundup, kulindeleke ukuthi akhiphe isinqumo ezindabeni ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.
Kwesinye isimo, abalawuli bezemvelo baseMonsanto naseCalifornia bazobhekana noJan. 27 ngaphezulu kwezinhlelo zabalawuli bezwe zokufaka kuhlu i-glyphosate njenge-carcinogen. IHhovisi LoMbuso Lokuhlolwa Kwezingozi Zemvelo Kwezemvelo (OEHHA) lithe lizofaka i-glyphosate ohlwini lwayo lwama-carcinogen aziwayo ngemuva kokwahlukaniswa kwe-IARC. IMonsanto imangalele ukuvimbela ukufakwa ohlwini. Ukulalelwa okuzayo kuthatha isinqumo sika-OEHHA sokuchitha icala likaMonsanto.
UCarey Gillam uyintatheli engumakadebona nomqondisi wezocwaningo we-US Right to Know, iqembu elingenzi nzuzo labathengi. Le ndatshana ivele okokuqala ku- I-Huffington Post.
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ikomidi Lokubuyekeza Ukuhlolwa Komdlavuza, EPA, glyphosate, IARC, Monsanto, Izinhlelo zeHhovisi Lezinambuzane, Izinsolo ze-Roundup, Rowland